Qaybaha Laanta Socdaalka oo dhibaato ka haysato Soomaalida | Somaliska
Xarumaha ay Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ay ku leedahay gobolada kala duwan ayaa dhibaato ka haysataa sidii ay jawaab saxa u siin lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee dalbaday in reerahooda loo keeno. Sida uu qoray wargeyska Värmlands Folkblad xarumaha Laanta Socdaalka ee kuyaal Örebro iyo Karlstad ayaa waxaa soo gaaray codsiyo fara badan ayadoo ay dhamaan diidmo siiyeen. "Diidmooyin badan ayaan bixinay, dadka ugu badan oo sida aadka loo diiday waa Soomaalida" ayay tiri Inger Francis oo ka tirsan Xarunta Örebro. Jahwareer ayaa ka haysta qeybaha kala duwan ee Laanta Socdaalka sidii ay jawaab cad u siin lahaayeen Soomaalida ayadoo bishii la soo dhaafay Laanta Socdaalka ay dacwo u gudbisay dowlada ayagoo ka codsaday in goaan cad oo macquul ah laga gaaro arimaha Soomaalida. Inger Francis ayaa sheegtay in aysan jawaab u ahayn sidii ay u turjuman lahaayeen goaankii maxkamada Socdaalka iyo sidii ay halkaan uga sii socon lahaayeen. Hadaba waxaa la filayay in dowlada ay jawaab cad siiyo Laanta Socdaalka bishaan aan ku jirno jawaabtaas ayaanan wali warkeeda hayn anagoo baaritaan ku sameyn doona isbuuca soo socda. Insha Allah
Xarumaha ay Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ay ku leedahay gobolada kala duwan ayaa dhibaato ka haysataa sidii ay jawaab saxa u siin lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee dalbaday in reerahooda loo keeno.
Sida uu qoray wargeyska Värmlands Folkblad xarumaha Laanta Socdaalka ee kuyaal Örebro iyo Karlstad ayaa waxaa soo gaaray codsiyo fara badan ayadoo ay dhamaan diidmo siiyeen.
“Diidmooyin badan ayaan bixinay, dadka ugu badan oo sida aadka loo diiday waa Soomaalida” ayay tiri Inger Francis oo ka tirsan Xarunta Örebro.
Jahwareer ayaa ka haysta qeybaha kala duwan ee Laanta Socdaalka sidii ay jawaab cad u siin lahaayeen Soomaalida ayadoo bishii la soo dhaafay Laanta Socdaalka ay dacwo u gudbisay dowlada ayagoo ka codsaday in goaan cad oo macquul ah laga gaaro arimaha Soomaalida.
Inger Francis ayaa sheegtay in aysan jawaab u ahayn sidii ay u turjuman lahaayeen goaankii maxkamada Socdaalka iyo sidii ay halkaan uga sii socon lahaayeen.
Hadaba waxaa la filayay in dowlada ay jawaab cad siiyo Laanta Socdaalka bishaan aan ku jirno jawaabtaas ayaanan wali warkeeda hayn anagoo baaritaan ku sameyn doona isbuuca soo socda. Insha Allah
waan idin salaamay dhamaan qorayaasha somaliska.com salaan kadib alla ayaa mahad leh kadibna waxaan u mahad celinayaa somaliska.com kuwaas oo waqti kasta isku hawlo sidee ay war ay ku qancaan ugu soo gudbin laahaayeen somaalida loo diiday eheladooda. waxaan idin dhahayaa waxaad tihiin syl kii sweden kana dhiidhiiyay dhibaatada soomaalida haysato. walaalayaal soomaalida malaha jaaliyado isku xiran oo u doodi karo dhibaatada haysato dadkooda marka waxaan is dhihi karaa fikrad ahaan somaliska.com waxbadan ayuu ka tari karaa arinkasta oo soomalida dhexdeeda sidii uu wacyi gelin ugu sameyn lahaa ineey noqdaan dad wax wada qabsado oo isku xiran meelkasta oo ay ka joogaan wadankan sweden. waad mahad santihiin
jimcale walaal baal iga soo waran xalada masha ayaa marso iyo rajada inta tahye mata aboowe waxaan maqalye ina maxkamad aay garte go ah in dadka dhiig laga qado ee aboowe iga soo jawaab mahadsanida
Anisa rajada way fiicantahay, waloow aanan maqal in ay maxkamada goaan gaartay balse waxyaabo badan ayaa la filayaa in ay dhacaan bishaan iyo mida soo socota oo aan soo qori doono insha Allah.
asc jimcale mahadsanid aboowe ilaahey wax qer badan ha ku siiyo aamin aamin sidaa noga farxiso markasta insha allah waxii ah qer
jimcale aad baa u mahadsantahay waxan ku weydinaya maxkamada socdaalka arinka somalida maxey kadamacsantahay malagayaaba in goaanka ayka laabato mise sidiisa ahaado
walaal waa mahasantahay jimcaale iyo saciid cabdi
C/raxman Mac.Dhere says:
Sln kadib walaal su aashan jawaab iga sii. Waxaa Caruurtayda oo sweden joogta laga qaaday DNA. Aniga Ethiopia baa la iiga qaaday. Kadibna diidmo ayaa la isiiyey. Marka sidee ku mutaystay diidmadan maadama ay u cadaatay inaan dhalay ilmahan?
February 20, 2011 at 08:05
C/raxmaan aniga Laanta Socdaalka kama shaqeeyo sidaa darteed jawaabta dhabta ah ee sida aad ku muteysatay aniga jawaabteeda ma hayo balse waxaan ku leeyahay adiga kaliga ma tihid, waxaa laga yaabaa ayagoo og in aad ilmaha dhashay in ay diidmo ku siiyeen waayo dad badan ayay sidaas ku sameeyeen sababtuna waxay tahay xitaa haday ogolaansho ku siiyaan Sweden ma imaan kartid waayo baasaboor ma leh. Marka waxkasta waxay ku xiran yihiin Go’aanka maxkamada ama Kan laga sugayo Baarlamaanka.
February 20, 2011 at 15:26
asc dhamaan waan idin salaamay hada barnaamijka daadihinaysa iyo walaalah figradahooda halkaan ka soo jeedinaya ninta rayiga fiican waxaa kaloo halkaan ugu mahad celinayaa walaalkeena soomaliyeed ee jimcaale aboowe jimcaale waad ku mahad santahay wararka sida aadka soomaalida u taabanaya ee aad soo gudbiso aboowe goorma ayaa u malaynaysaa inay jawaab ka soo baxdo ilaahay subxaane watacaale hanoo saqiro arimaheena adigan qayr alaha ku siiyo waana mahadsantahay bye insha allaahu qayr
Marka hore waxaan salaamayaa dhamaan walaalaha soomaaliyeed oo ku wada nool wadanka Sweden,waa in aad muujisaan dadaal weyn oo ah , Mudaaharaadyo , lana socodsiiya dadka leh Gacanhaye ( Ceyrta ) iyo Macalimiinta Iskuulada in ay idin haysato dhibaato xaga familada oo aadan maskax ku joogin wadankan.
Run ahaantii waa la dadaalay, laakiin waa in aan si weyn u sii dadaalnaa inta aan kla gaarayno Natiijadeena oo ah in na laga qaado xayiraada na lagu soo rogay, Ilaaheyna ha nala garab galo. Haka cabsanina wargeysyada iyo idaacadaha waxa aan ku hadleyno waa xuquuqdeena ma ahan wax kale. waadna mahadsan tihiin.
waan idin salaamay dhamaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee qora somaliska.com waana ku mahadsantihiin sida aad markasta noogu soo gudbisaan warar waxaan idin leeyahay hakadaalinina ee sidaas u wada mahad galin iyo bogaadin iyo ejarba waad ka heleysaane
wlh asxabey swedan halisku ciyaro ey wada lkn wan kaar dhorena bal says:
A/sswedan wa ey wado wa iaka bashal lkn somalida iyada sifiican ha u istagto sidi logu kenilahay family ilah qer hakadhigo
asc walal aniga waa ley diiday carurteyda waayo mana aqaano sababta waa 2 curur iyo aabahood balse waan arki donaa natijada swedan haday dhahaan dhig waxaan u ahay diyaar e waxaan ku nolahay niyad jab iyo fikir iyo hurdo la aan e waxa walbo diyaar ayaan la ahay wayo carurta aniga ayaa dhalay waan huwaa taas asc